Ny asa mety rehetra azonao atao amin'ny maha-mpamorona sary | Famoronana an-tserasera
«Magazine New Stage 01» nosoratan'i Matias Cano Design dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-SA 2.0
Liana amin'ny kanto nomerika ve ianao? Te-ho mpamorona sary ve ianao? Ity asa famoronana ity dia manana fahafaha-miasa marobe noho ny fitomboan'ny haitao. Andao fantarina izy ireo!
Voalohany indrindra, mora ny mahafantatra fa ny fanatanterahana ny maro amin'ireo haitao manokana ireo dia ilaina ny fampiofanana mifameno amin'ny mpamolavola, satria tsy afaka ny handrakotra azy rehetra amin'ny lalina.
1 Famolavolana lamba
2 Volavola fanontana
3 Famolavolana multimedia
5 Drafitra doka
6 Famonosana na famonosana fonosana
7 Famolavolana ny famantarana ny orinasa na ny marika
8 Famolavolana typographic
10 Famolavolana signage
Ny famolavolana lamba dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo sampana mamorona indrindra amin'ny famolavolana sary. Azonao atao ny mamorona lamina na lamina ampiharina amin'ny vokatra marobe ao anatin'ny tontolon'ny lamba: fitafiana, lambam-pandriana, firakofana sofa, ondana ary sns sns. Raha liana te hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba fanaovana modely ianao dia mamporisika anao aho hitsidika an'ity lahatsoratra teo aloha. Raha te hanjaitra koa ianao dia azo antoka ny fahombiazana, amin'ny famoronana vokatra tsy manam-paharoa sy manokana.
Noho ny famolavolana fanontana, mahazo tanjaka ny lahatsoratra iray ary mampitombo ny fahalianan'izay mamaky azy. Ity sampana famolavolana ity dia mifototra amin'ny firafitra sy ny firafitry ny famoahana boky (boky, magazine, gazety, rakotra album, sns.), Mifantoka amin'ny hatsaran-tarehin'izy ireo, afaka manampy sary, sary ary sary nomerika.
Raha manana fahalalana momba ny famolavolana fanontana, azonao atao ny miasa amin'ny mpanonta, haino aman-jery, masoivoho, sns.
Ity sampana famolavolana ity dia malalaka be. Miorina amin'ny fampiasana sary, feo, horonan-tsary, lahatsoratra, sns, voalahatra amin'ny media nomerika. Amin'izany no ahafahanao mamorona rindran-tranonkala, sarimiaina, sary, sora-baventy dokam-barotra, tranofiara, lalao video, sns.
Ny maha-mpamorona haino aman-jery anao dia tsy ho fohy asa intsony ianao anio. Ny fahalalanao dia ilaina amin'ny orinasan-doka, orinasa mpamorona lalao video, amin'ny sinema sy snsetera lava.
Na dia heverina ho mahazatra aza fa ny fanoharana dia tsy miankina amin'ny famolavolana sary, raha ny tena izy ankehitriny dia miankina betsaka aminy io, satria amin'ny ankamaroan'ny fotoana mila digitalisation izany, izay manana fahafaha-manao betsaka kokoa noho ny sary an-tsary.
Hanangana sary amin'ny tanana na nomerika izahay. Ilaina ny fanoharana amin'ny famoahana trano (boky sary, boky fampianarana, magazine), amin'ny orinasa mamolavola vokatra (fitaovam-panoratana, famolavolana lamba, sary sokitra, sns.) Ary amin'ny zavatra rehetra azonao eritreretina azo an-tsary.
Ao anatin'ny fanoharana dia afaka manampahaizana manokana amin'ny sampana isan-karazany isika, toy ny fanoharana ho an'ny ankizy (mifantoka amin'ny famoronana vokatra ho an'ny ankizy, miresaka izany isika amin'izany lahatsoratra teo aloha), ny siantifika (fototra hahatakarana ireo hevitra siantifika maro, araka ny fanazavanay ao anaty lahatsoratra hafa), ny editorial (mifantoka amin'ny magazine sy boky), ny sarin'ny tantara an-tsary (manga, tantara an-tsary mahazatra, sns.), ny vazivazy (ohatra, ny sary mihetsika mampihomehy mahazatra an'ny gazety) ary snsetera lava.
«Adidas Vader» avy amin'i LuisMaram dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Drafitra mpamorona sary mifantoha amin'ny famoronana sary izay mivarotra vokatra (afisy, bokikely sns). Noho izany, arakaraka ny haim-panahin'ny varotra fantany no tsara kokoa.
Famonosana na famonosana fonosana
Izy io dia mifandray akaiky amin'ny famolavolana dokam-barotra, satria ny famoronana fonosana ho an'ny vokatra maharesy lahatra.
Famolavolana ny famantarana ny orinasa na ny marika
Manampy amin'ny famoronana marika miavaka amin'ny orinasa izy ireo, zavatra iray mampiavaka azy sy tsy mitovy amin'ny hafa, ary koa ny fiarahany manana soatoavina sasany.
Mpanamboatra manokana izy ireo amin'ny famoronana litera, izany hoe typografia. Marika marobe ankehitriny no manana vokatra misy taratasy, satria tena lamaody.
Izy io dia iray amin'ireo fiaingana lehibe niainan'ny mpamorona sary tamin'ny taonjato XXI. Nandany ny ankamaroan'ny androm-piainantsika nitety tranonkala izahay. Arakaraka ny mahasarika sy mahaliana azy ireo (izay miankina betsaka amin'ny estetika), arakaraka ny habetsaky ny tsindry ho azontsika ary arakaraka ny habetsaky ny vola ho azontsika Noho izany ilaina ny mpamorona tranonkala amin'ireo lafiny ireo.
Na aiza na aiza misy famantarana (na amin'ny valan-javaboary, valan-javaboary, lalan'ny tanàna, toeram-pivarotana, làlana ...) dia misy mpamorona sary ao aoriany.
Azonao atao ihany koa ny manokana ny tenanao amin'ny retouching sary, amin'ny alàlan'ny fampiasana programa hafa toy ny Photoshop.
Ary ho anao, inona no specialty hitanao fa mahaliana indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny asa rehetra mety ho azonao atao amin'ny maha-mpamorona sary anao